Lix dabeecadood oo ay ka siman yihiin hoggaamiyeyaasha wanaagsan | Biyoguurenews.com
Home Wararka Lix dabeecadood oo ay ka siman yihiin hoggaamiyeyaasha wanaagsan
For years, Angela Merkel has been praised for her leadership in the European Union and beyond
Hoggaanku waa mowduuc xiiso badan. Waxaan baaritaan ku sameynaa hoggaanka haddana waxaan aragnay inay adagtahay in la qeexo yaa hoggaamiye ah. Sidaas oo ay tahayna waxaan awoodnaa inaan aqoonsanno hoggaamiyaha fiican.
Soo jiidashada ay hoggaamiyeyaashu ku sameeyaan dadka kale, dabeecaddooda, awooddooda xiriirka iyo hiigsigiisa mustaqbalka ayaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka kale uga duwan yihiin. Angela Merkel ayaa lagu ammaanay hoggaankeedii Midowga Yurub, iyadoo billado sharafeed badan ay siiyeen hoggaamiyeyaasha Yurub iyo dalal kaleba.
Haddii aan eegno taariikhda hoggaamiyeyaasha wanaagsan, waxaan arki karnaa qaabka ay u soo koreen iyo sida ay ugu suurto gashay inay hoggaamiyeyaal noqdaan. Waxay isku dayayeen inay is dhisaan, is horumariyaan ayna dadaalaan ilaa ay ka gaaraan guusha.
Haddaba waa maxay waxyaabaha qofka ka dhiga hoggaamiye? Waxaan soo qaadaneynaa lixdan qodob.
1. Muhiimadda halka ay ku soo barbaareen
Halka uu qofku ku soo barbaaray, iyo gaar ahaan, saameynta ay waaliddiintu ku leeyihiin, ayaa la sheegay inay saameyn weyn ku yeeshaan hoggaamiyeyaasha.
Waxyaabaha ay waaliddiinta ka dhaxlaan, taageerada shuruud la’aanta ah ee ay guriga ka helaan, iyo waxyaabaha laga filo wiilasha iyo gabdhaha ayaa si xooggan u saameeya xubnaha qoyska.
Dabeecadaha uu ilmuhu ka dhaxlo waalidka ayaa la sheegay inay si toos ah u saameeyaan carruurta, ilaa ay ka weynaadaan ayna ka noqdaan hoggaamiyeyaal.
2. Asxaabta iyo waxbarashada
Marka la eego waddooyinka hoggaamiyeyaashu ay maraan, carruurnimadoodii iyo dhalinyaranimadoodii ayaa saameyn ku yeesha mustaqbalkooda, sida saaxiibbadood iyo dadka ay isla soo shaqeeyeen.
Waxay bartaan la dhaqanka dadka kale iyo dabeecadahooda.
Sanado kaddib, saaxiibbada ay yaraantoodii barteen waxay u noqdaan kuwo gacan weyn ka siiya mustaqbalkooda.
3. Dhacdooyinka nolosha
Ilaa noloshooda waxaa ku dhaca dhacdooyin qaabeeya mustaqbalkooda. Xaaladahaas waxaa ku jira fursad waxbarasho oo ay hoggaamiyeyaashu ka faa’iideystaan.
Dhacdooyinkaas waxaa ka mid ah kuwo ka mid noqda taariikhda hoggaamiyaha, sida geerida qof ku weyn, shil, guuldarro ganacsi iyo qaar kale oo badan.
Hoggaamiyuhu ma doorto xaaladahaas aan laga sii warqabin, balse wuxuu doortaa jawaabaha uu ka bixinayo. Halkaas ayaa wuxuu ka helayaa waxbarasho qaabeysa inta ka dhiman noloshiisa.
4. Fursad iyo nasiib
Waanu isku diyaarin karnaa wax hoggaaminta, balse si aan taas u sameyno waa inaan helnaa fursad.
Xaqiiqdii, waxaa laga yaabaa inay fursado soo baxaan isla markaana aynaan annagu diyaar ahayn, amaba inaan diyaar nahay laakiin aysan fursado jirin.
Sababtaas darteedna, inaad noqoto hoggaamiye, waxaa loo baahan yahay inaad hesho nasiib aad ku noqoto.
Hoggaamiyeyaashii laga wareystay taariikhdooda waxay xuseen inay diyaar ahaayeen markii ay fursado soo baxeen. Qaarkood ayaa fursadaha raadiyay, ee ma aysan sugin.
5. Waa kuwo heegan ah
Hoggaamiyeyaashu waa kuwo dabeecad ahaan heegan ah. Waxay leeyihiin himilo ay isku dayaan inay gaaraan amaba ay ka dheereeyaan wixii laga filayay.
Marka aad dooneyso inaad howl qabato, waa inaad tabarrucaad sameysaa.
Waxay door bidaan inay ku shaqeeyaan xaalado aan la saadaalin karin, intii ay qaadan lahaayeen go’aamada dadka kale, inkastoo ay maanka ku hayaan muhiimadda ay dadka kale u leeyihiin hoggaankooda.
Heegan noqoshadu waa wax ku xiran kalsoonida qofka. Waxay aaminaan awooddooda iyo aqoontooda, waxay aaminaan naftooda taas oo ka dhigta kuwo ad adag.
6. Inuu noqdo mid mar walba wax barta
Hoggaamiyuhu waa mid mar walba aan ka weynaan waxbarashada. Waa hannaan socda weligii oo ku qotoma waxbarasho. Waa hannaan socda oo lagu dabaqayo xaqiiqooyinka jira.
Waxbarashadu maaha hadaf, balse waa ujeeddo. Ma aha dhammaadka, balse waa waddada.
Waxbarashadaas aan dhammaan ayaa hoggaamiyaha u suurtogelisa inuu wax hoggaamiyo. Waxay ka war qabaan in looga baahan yahay inay la qabsadaan xaqiiqooyinka jira ayna u bareeraan khataraha, iyagoo kaashanaya aaminaadda xooggan ee ay ku qabaan awoodahooda.
Previous articlemujaahid dhegawayne, Dhaqan iyo dhiig iyo degaan aya inaga dhexeeya, garxajisow, wana ku mhadsanatihiin gogashan aad……
Next articleNinkii Buuraha fuuli jiray ee nasiibka lahaa,